Uluhlu lwakho lokuKhangela kuYilo oluPhezulu lweMeyile oluPhendulayo Martech Zone
Uluhlu lwakho lokuKhangela kuYilo oluPhezulu lweeMeyile eziPhendulayo
NgoLwesihlanu, Meyi 29, 2015 NgoLwesine, Meyi 28, 2015 Douglas Karr
Akukho nto indiphoxa kakhulu xa ndivula i-imeyile endijonge kuyo kwisixhobo sam esiphathwayo kwaye andikwazi ukuyifunda. Nokuba imifanekiso inobunzima obunekhowudi enobunzima obungaphenduliyo kumboniso, okanye isicatshulwa sibanzi kangangokuba kuye kufuneke ndiskrole ndibuyela umva ukuze ndiyifunde. Ngaphandle kokuba kubalulekile, andilindi kubuyela kwidesktop yam ukuze ndiyifunde. Ndiyayicima.
Ayindim ndedwa-abathengi kunye namashishini afunda ngaphezulu kwesiqingatha sazo zonke ii-imeyile kwizikrini ezincinci ngoku. Uyilo lwe-imeyile oluphendulayo lubalulekile kwi-imeyile yakho yokucofa amaxabiso.
Ukusukela ukuba siphumeze ii-imeyile eziphendulayo phantse kuwo onke amaqonga enkonzo ye-imeyile, sihlala sifikelela kule mibutho kwaye sinikezela ukunceda. Andizange ndifumane mpendulo. Kubi kakhulu-bahlawula iqonga lokuthumela i-imeyile ekungekho mntu ufundayo. Ukuhlengahlengisa eyakho Itemplate ye-imeyile kulula ukuyithethelela. Khawufane ucinge xa ​​usiya kumshicileli emsebenzini wakho kwaye ulahla isiqingatha sephepha… yile nto uyenzayo xa ungaziphenduli ii-imeyile zakho.
Ezona ndlela zintle ziye zavela kule ndawo yentengiso. Uyilo oluphendulayo alukho lula- kodwa ayenzeki, nalo. Sibe nabantu abakwiiMonks ze-imeyile abasincedayo kwaye balandela olu luhlu lokutshekisha luqinisekisiweyo lokusebenzisa i-imeyile yakho ukuqinisekisa ukuba iyaphendula kwimiboniso yeeselfowuni kunye neetafile.
Uyilo kwikholamu enye
Yila ngeminwe engqondweni
Gcina ifayile ye- Iifowuni zokuSebenza ukucofa ngokulula (ubuncinci be-44px)
Sebenzisa indawo emhlophe yokukhangela ngokulula
Gcina i-header icocekile
Lungiselela izigqibo zemifanekiso yokubonisa i-retina
Sukuxinana ngokudibanisa, sebenzisa amaqhosha
Ukubonelela iinombolo zefowuni ezidityanisiweyo
Nciphisa imigca yesifundo kubalinganiswa abangama-30 okanye ngaphantsi
Sebenzisa ububanzi bomfanekiso ubuncinci be-480px ukuze bangaphambuki xa bethe nca kwiselfowuni
Sukulinganisa imifanekiso, sebenzisa imibuzo yemidiya yeCSS
Thintela ukuphakama-ii-imeyile ezimfutshane kulula ukuskima
Gcina iiFowuni eziSebenzayo eziSebenzayo ngaphezulu kwesibaya
Vavanya uyilo lwakho lwe-imeyile kubathengi be-imeyile
tags: uluhlu lokuhlolamobile imeyile ephendulayoUluhlu lokuphendula lwe-imeyileUyilo lwe-imeyile oluphendulayoUluhlu lokuphendula lwe-imeyile ephendulayo
Yintoni ekhuthaza ukuba wabelane nabanye kwi-Intanethi? I-Psychology yoKwabelana
Amanyathelo ama-8 okuphucula iziphumo zakho zeNtengiso yeDijithali
Okt 2, 2015 ngexesha 1:15 AM
Ngokwenene eli linqaku elihle kunye nenqaku uDouglas! Ndifunde lukhulu koku.
Uninzi lwamanqaku athetha malunga noyilo lwewebhu oluphendulayo, eli lixesha le-1 lokufunda malunga noyilo lwe-imeyile oluphendulayo. Iingcebiso ezintle kunye namanyathelo owafakileyo apha. Yeyiphi i-imeyile yokuthengisa oyisebenzisileyo?
Okt 2, 2015 ngexesha 2:54 AM
Sisebenzisa ezethu I-CircuPress ukuze sikwazi ukudibanisa ngokupheleleyo indawo yethu yeWordPress kwii-imeyile zethu!